Onyankopɔn pɛ sɛ yɛtena ase asomdwoe mu na yɛn ani gye daa wɔ paradise asase so!
Nanso, ebia wubebisa sɛ: ‘Ɛbɛyɛ dɛn na saa asɛm no atumi abam?’ Bible ka sɛ Onyankopɔn Ahenni no betumi ama abam. Ɛyɛ Onyankopɔn pɛ sɛ nnipa nyinaa sua saa Ahenni no ne nea ɔbɛyɛ ama yɛn no ho ade.—Dwom 37:11, 29; Yesaia 9:7.
Onyankopɔn pɛ sɛ esi yɛn yiye.
Sɛnea agya pa biara pɛ sɛ esi ne mma yiye no, saa ara na yɛn soro Agya no nso pɛ sɛ yenya anigye daa. (Yesaia 48:17, 18) Wahyɛ bɔ sɛ nea ‘ɔyɛ ade a Onyankopɔn pɛ no bɛtena hɔ daa.’—1 Yohane 2:17.
Onyankopɔn pɛ sɛ yɛnantew n’atempɔn so.
Bible ka sɛ yɛn Bɔfo no pɛ sɛ ‘ɔkyerɛ yɛn n’akwan’ na ama yɛatumi ‘anantew n’atempɔn so.’ (Yesaia 2:2, 3) Wayi ‘nnipa bi ama ne din’ sɛ wɔmma wonhu n’apɛde wɔ asase nyinaa so.—Asomafo Nnwuma 15:14.
Onyankopɔn pɛ sɛ yɛsom no wɔ biakoyɛ mu.
Yehowa nokware som no ma nnipa fi wɔn komam dodɔ wɔn ho, na ɛma wɔyɛ biako sen sɛ ɛbɛma wɔn mu apaapae. (Yohane 13:35) Ɛnnɛ, henanom na wɔrekyerɛkyerɛ mmarima ne mmea a wɔwɔ baabiara sɛnea wɔsom Onyankopɔn wɔ biakoyɛ mu? Yɛpɛ sɛ saa nhomawa yi boa wo ma wuhu wɔn.
Wo ne yɛn nsua Bible no. So woafi ase ne Yehowa Adansefo resua Bible no? Sɛ wumfii ase a, so w’ani begye ho sɛ wɔne wo besua Bible no? Wuntua hwee. Wubehu sɛ ɛyɛ ɔkwampa a wubetumi afa so abɛn Onyankopɔn yiye.
Kogye nhoma a wuntua hwee. Wubetumi akɔ Ahenni Asa a ɛwɔ mo mpɔtam hɔ so akogye nhoma bi a ɛwɔ wo kurom kasa mu a ɛbɛboa wo ma woate Bible no ase, anaa wo ne Yehowa Dansefo bi nkasa ma ɔmma wo bi.
Sua yɛn ho nsɛm wɔ Intanɛt so. Kɔ Yehowa Adansefo Intanɛt dwumadibea hɔ wɔ www.jw.org. Wubetumi akenkan Bible ne yɛn nhoma ahorow no wɔ hɔ. Yɛn nhoma ahorow no wɔ kasa bɛboro 600 mu, na wubetumi atintim emu pii.